Nhau - Kambani yedu yakabatanidzwa muShanghai International Adhesives uye Sealing Exhibition
Boka redu muchirongwa Shanghai International Adhesives uye rakavhara Exhibition
Boka redu muchirongwa Shanghai International Adhesives uye rakavhara Exhibition rakaitirwa Shanghai New International Expo Center musi September 16-18, 2020.
Kune vazhinji varatidziri muchiratidziro ichi uye makwikwi acho anotyisa. Iyo kambani yakahaya angangoita makumi mana emamirimita emahara yekuratidzira uye yakaunza zvigadzirwa zvina, zvinoti muchina wekuzadza, muchina wekudhinda, wakasanganisa mapuraneti mupuraneti, uye muchina une simba wekupararira. Muchina wekuzadza watakataridza nguva ino wakasiyana newemamwe makambani. Michina yedu yekuzadza yakakamurwa kuita imwechete-chubhu uye mbiri-chubhu. Iyo yekuzadza kurongeka yakanyanya kukwirira uye inokodzera kune zvinonamira zveakasiyana viscosity. Mamwe makambani anoshandisa kuzadza muswe, kambani yedu yakagadzira yakasarudzika musoro yekuzadza tekinoroji, ichizadza panzvimbo yeglue. Izvi zvinobudirira zvinodzivirira matema emhepo matsva panguva yekuzadza maitiro. Hukuru hwechubhu yeiyo mbiri-chubhu yekuzadza muchina inogona kugadziriswa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi. Ose maviri chubhu uye mbiri chubhu zvinozadzwa yakatambarara, iyo inogadzirisa dambudziko remhepo kusanganisa uye kufashukira mukumira kuzadza, uye mashandiro acho ari nyore.
Mushure memazuva matatu ekuratidzira, kambani yedu yakagamuchira gumi nemaviri mirairo uye yakasvika kubatira pamwe nevavariro nemakambani anopfuura makumi matatu. Natsiridza kuoneka kwekambani kumusoro nepamusoro pekambani indasitiri, uye nekuisa hwaro hwakasimba hwekuwedzera kwekambani.
Panguva imwecheteyo, kambani yedu yakagara ichishandisa mari yakawanda pakutsvagisa tekinoroji nekusimudzira. Chiratidziro ichi chakasimbisawo kutsunga kwekambani yedu mukutsvagisa tekinoroji nekusimudzira. Mune ramangwana, isu tichasangana nemusika uye toshandisa tekinoroji sevimbiso yekupa vatengi zvimwe zvigadzirwa zvemhando yepamusoro nemitengo yakanaka uye mashandiro akanaka, kusangana nezvinodiwa nevatengi vekumusoro nekuzasi nezviito zvinoshanda.
Post nguva: Nov-18-2020